श्रीमान् श्रीमतीसँगै नबस्दाको यौनसन्तुष्टि | Bishow Nath Kharel
श्रीमान् श्रीमतीसँगै नबस्दाको यौनसन्तुष्टि
यौन हाम्रो जीवनको अभिन्न भाग हो। हामी आफ्नो यौनचाहना स्वाभाविक रूपमै पूरा गर्ने प्रयास गर्छौं, यो अधिकारको कुरा पनि हो। प्रत्येक समाजले यसलाई महत्त्व दिएको हुन्छ र यसलाई पूरा गर्न सक्ने बाटो खुला गरिदिएको हुन्छ। विवाह गर्ने परम्परा समाजमा महत्त्वका साथ स्थापित हुनुको पछाडि यही कारण हुनुपर्छ, तर प्रायःजसो छुट्टिएर बस्दा यौनचाहना शान्त पार्न हामी प्राकृतिक रूपमै वैकल्पिक उपाय खोज्न थाल्छौं। अध्ययनहरूले नियमित यौनसम्पर्क गर्ने व्यक्ति आफ्नो नियमित साथीसँग छुट्टएिर लामो समयसम्म बस्दा यौनचाहना पूरा गर्ने वैकल्पिक उपायका रूपमा अर्को व्यक्तीसँग यौनसम्पर्क राख्ने गरेको देखाएका छन्। यो धेरै किसिमले जोखिमपूर्ण हुनसक्छ। अर्को, सजिलो बाटो भनेको हस्तमैथुन नै हो, जुन तपाईंले गरिरहेको बताउनुभएको छ।
हस्तमैथुनले सन्तान जन्माउनै नसक्ने हो कि ?
तपाईंको मनमा किन यस्तो कुरा आयो, थाहा भएन। हस्तमैथुन प्राकृतिक यौन क्रियाकलाप हो। यौन आनन्द प्राप्त गर्ने उपायहरूमध्ये यौनअङ्गको घर्षण नै प्रमुख उपाय हो। सम्भोग गर्दा यौनअङ्गहरू एक-आपसमा घर्षण गराइन्छन्। मानिसले आफ्नो यौन अङ्गको घर्षण अरू कसैको यौन अंगमा गराए मात्र यौन आनन्द पाउँछ भन्ने होइन। सिद्वान्ततः सम्भोग गर्दा र हस्तमैथुन गर्दा यौनअङ्गको घर्षणबाट यौन आनन्द पाउने प्रक्रिया उस्तै हो। त्यसैले सम्भोग गर्दा हानि नहुने तर हस्तमैथुन गर्दा हानि हुने भन्न मिलेन। यसलाई प्राकृतिक नमान्नेहरूमध्ये कसैले यसलाई पापसँग जोडेका छन् भने कसैले खराब स्वास्थ्यसँग, त्यसैले समाजमा अनेक मिथ्या धारणा व्याप्त छन्। हस्तमैथुन गरे अनुहारमा दाग आउने, आँखाको दृष्टि कमजोर हुने, नपंुसक हुने, विवाहपश्चात् आफ्नो यौन साथीलाई सन्तुष्टि दिन नसक्ने वा शीघ्र स्खलन हुन्छ भन्ने जस्ता भ्रम व्याप्त छन्। यसले स्मरणशक्तिमा पनि ह्रास हुने होइन। दिनहुँ यौनसम्पर्क गरेर वीर्य स्खलन गर्दा वा हस्तमैथुन गरेर वीर्य स्खलन गर्दा प्रजनन क्षमतामा असर पर्दैन।
बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा, हस्तमैथुनले स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै हानि-नोक्सानी गर्दैन। मेरो विचारमा हस्तमैथुनसँग तपाईंको पैताला पोल्ने कुराको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छैन, त्यो विशेष गरेर तपाईंको मानसिक पक्षसँग सम्बन्धित देखिन्छ।
हस्तमैथुनको उपचार के होला ?
माथी नै भनिसकियो, हस्तमैथुन प्राकृतिक यौन क्रियाकलाप हो। त्यसैले यसको उपचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। यो स्वाभाविक रूपमै हुने यौन तनाव कम गर्ने महत्त्वपूर्ण उपाय हो। दुःखको कुरा के भने कतिपय स्थानमा यो प्राकृतिक यौन क्रियाकलापको उपचार गर्ने चलन छ र यसमा प्रशस्त खर्च गर्ने गराउने काम पनि हुन्छ, जुन आवश्यक छैन। अनावश्यक रूपमा चिन्ता वा हीनताबोध गरे त्यसको नकारात्मक असर पर्न सक्छ। यसलाई हामीले मनबाट निकाल्न सक्नुपर्छ
यो स्वाभाविक प्रक्रिया एवं शरीरको मागअनुरूप नै हुने भएकाले यसलाई कम गर्नु वा बन्द गर्नु आवश्यक छैन। शारीरिक रूपमा धेरै परिश्रम पर्ने किसिमका काम वा खेलकुदहरू, यौन उत्तेजना नहुने प्रकारको साहित्य पढ्ने वा आफ्नो सौखका अन्य विषयमा प्रशस्त समय दिनेजस्ता क्रियाकलाप गरेर पनि हस्तमैथुनलाई केही हदसम्म कम गर्न सकिन्छ।
श्रीमतीले कसरी यौनआनन्द प्राप्त गर्ने ?
तपाईं घर फर्किएका बेला पर्याप्त यौनसम्पर्क भएको बुझिन्छ। यसले पक्कै एकहदसम्म तपाईंकी श्रीमतीको यौन सन्तुष्टिका लागि आवश्यक खुराक पुग्न सक्छ। तपाईंले कहिलेकाहीं मात्र घर जान्छु भन्नुभएको छ तर केही सातामा हो कि केही महिनामा हो वा त्योभन्दा बढी हो भन्ने थाहा भएन। घर जाने समयको दूरी कम गर्न सकिए श्रीमतीले अनि तपाईंले पनि यौन-सम्पर्कबाट यौनआनन्द प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ।
अर्को पक्ष के हो भने जसरी तपाईंले हस्तमैथुन गर्नुहुन्छ त्यसरी नै श्रीमतीले पनि हस्तमैैथुन गर्नुभए उहाँलाई नियमित रूपमा यौन आनन्द प्राप्त हुनसक्छ । हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो, हाम्रा कतिपय अङ्ग-प्रत्यङ्ग यौन संवेदनशील हुन्छन्। हाम्रा केही विशेष अङ्गलाई स्पर्श गर्दा एक विशेष किसिमको यौन सुखानुभूति प्राप्त हुन्छ र त्यसलाई निरन्तरता दिन सकिए चरमसुखसम्म प्राप्त गर्न सकिन्छ। वास्तवमा महिलाहरूको कुरा गर्ने हो भने भगांकुर, योनि, भगक्षेत्र तथा स्तन विशेष किसिमले यौन संवेदनशील हुन्छन्। आफूले मन पराएको व्यक्तिले ती अङ्गको स्पर्श गर्दा यौनआनन्द आउने कुरा एकातिर छ भने आफैंले पनि ती अङ्गको स्पर्श गर्दा, घर्षण गर्दा वा भनौं खेलाउँदा यौन आनन्द प्राप्त हुन्छ।
व्यक्ति-व्यक्तिअनुसार हस्तमैथुन गर्ने तरिका फरक पर्छ नै। महिलाहरूको हस्तमैथुनमा भगांकुरको घर्षण एक प्रमुख क्रियाकलाप हो। यसमा हात प्रयोग मात्र होइन, जाँधले दबाब दिनु वा अन्य वस्तुमा घर्षण गराउनुजस्ता अनेकौं क्रियाकलाप पर्छन्। महिलामा योनिभित्रै औंला वा केही कुरा पसाएर हस्तमैथुन गर्ने चलन पनि छ। हस्तमैथुन गर्दा उल्लेख्य संख्यामा महिलाहरूले स्तन खेलाउने कार्य गर्छन्। विशेष गरी पश्चिमा मुलुकहरूमा अनेकौं किसिमका यौन प्रसाधन पनि प्रयोग गरिन्छ।
Source : http://www.ekantipur.com/saptahik/article/?id=5054